Ny VisualEditor dia fitaovana hahafahana manova ny pejin'i Wikipedia amin'ny alalana mpanova WYSIWYG (what you see is what you get, "izay hitanao eo no hiseho") izay tsy ilàna mahafantatra ny rariteny MediaWiki.
Tsara ho an'ny mpikambana vaovao ny mampiasa ny mpanova WYSIWYG, satria izy ireo mety tsy mbola zatra amin'ny raritenin'ny pejin'i Wikipedia. Noho izany dia vitsy kokoa ny fahaizana ara-teknika ilaina rehefa manova pejy wiki.
Mampiasa ny WYSIWYG VisualEditor[hanova ny fango]
Midira ao amin'ny "safidy" ary jereo ao amin'ny "fonctionnalités bêta". Tsindrio ny eo amin'ny misy soratra hoe "ÉditeurVisuel", ary tsindrio tehirizo any amin'ny faramparan'ny pejy. Mampiasa ny WYSIWYG amin'izay ianao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:VisualEditor&oldid=1042192"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 20:55 ity pejy ity.